To Uyibukela njani iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 yasimahla | I-Androidsis
Uyibukela njani iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 yasimahla
UAron Rivas | 15/07/2021 09:32 | Izaziso
Los Imidlalo yeOlimpiki eTokyo 2020 Bakufutshane nekona kwaye izinto ezilindelweyo kulo msitho mkhulu wezemidlalo ziphezulu. Kwaye ke, kwintsuku nje ezimbalwa, bazakubanjelwa eJapan, ngayo yonke into enxulumene nomsitho obaluleke kangaka kunye nobukhulu.
Amawakawaka eembaleki kunye nabadlali bezemidlalo abazakuthatha inxaxheba, bemele uninzi lwamazwe kwaye beshiya iiflegi zabo ziphezulu. ISpain sele ilungile, ke sinokulindela iziphumo ezilungileyo kulo nyaka. Ukuba ufuna ukubona iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 yasimahla, naku sisixelela ukuba njani.
1 Ziqala nini kwaye ziphela nini?
2 Ke ungayibukela iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 yasimahla
3 Ezinye iindlela zokubona iiOlimpiki zaseTokyo 2020
3.0.1 I-RTVE (iRadio yaseSpain kunye neTV)
4 ISpain kwiiOlimpiki
4.1 Imidlalo kunye noqeqesho apho iSpain iya kuthatha inxaxheba khona
4.2 ISpain iqhube njani kwiiOlimpiki zangaphambili
5 Iimbaleki ezinkulu zaseSpain ezingazukuthatha inxaxheba kwiiOlimpiki zaseTokyo 2020
6 Imidlalo emitsha emi-5 yongezwa kwiiOlimpiki
Ziqala nini kwaye ziphela nini?
IiOlimpiki zaseTokyo zazifanele ukuba zenzeke ngonyaka eyayinelungelo lawo, okokugqibela, phakathi kukaJulayi 24 no-Agasti 9. Nangona kunjalo, ngenxa yalo bhubhani, ikomiti eququzelelayo kuye kwanyanzeleka ukuba irhoxe kude kube ngoku, kuba kukho iimeko ezingcono kuphuhliso lwale misebenzi kwihlabathi liphela. Ngoku ezi Ziza kuqala nge-23 kaJulayi kwaye ziphele nge-8 ka-Agasti. Ngalo lonke elo xesha, kuyakubakho ininzi yemidlalo kunye nokhuphiswano lweembaleki, kwaye iSpain, njengamanye amazwe amaninzi, izakubakho kuninzi lwezi.
🥇 Zama inyanga yasimahla: Ungaphuthelwa nantoni na evela kwiiOlimpiki ucofa apha. Uyakwazi ukubona zonke iimvavanyo kunye nemidlalo ekhethekileyo ekhethekileyo (F1, basketball, ibhola ekhatywayo…) ngaphandle kokuzinikela.
Ewe, umsitho awuyi kuba nabaphulaphuli njengakwimihla yangaphambili, into ebonisa ukuba iingxaki ezibangelwe yi-COVID-19 zisekhona nanamhlanje, ngaphandle kwento yokuba banciphile ukubonga kwizitofu zokugonya ezahlukeneyo esele zikhona ehlabathini kunye nezinye izinto ezinciphise ukusasazeka kakhulu.
Ke ungayibukela iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 yasimahla
Zininzi iindlela zokubona iiOlimpiki zaseTokyo 2020. Nangona kunjalo, uninzi luyahlawulwa, kunjalo. Zimbalwa kakhulu ezikhululekileyo kwaye, kwangaxeshanye, zikumgangatho olungileyo.
Olona khetho lulungileyo kukuya kwi-DAZN, ehlawulwayo, kodwa unikezela inyanga yetyala yasimahla ngaphandle kwesigxina, enokurhoxiswa ngokulula nangaliphi na ixesha, ukuze kuthintelwe ukwenza intlawulo.
Ngale nto umsitho uza kusasazwa. Ngaxeshanye, eminye imidlalo kunye neeligi kwihlabathi liphela nazo zisasazwa, kulungile ke ukuba uhlale unolwazi ngayo yonke into eyenzekayo malunga nemidlalo, iimbaleki nayo yonke into eyakwenzeka kwihlabathi leengqeqesho zeMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020, kunye nemilo yamanqindi ebaluleke kakhulu, iiligi zebhola ekhatywayo. I-del Rey, i-Premier League, njl.
Iindlela zokuhlawula ziphakathi kwezona zidumileyo. Ungasebenzisa ikhadi lakho letyala okanye i-Visa, MasterCard, JBC okanye iAmerican Express. Unokukhetha kwakhona i-Paypal, i-Google Pay, ukuhlawula nge-Apple okanye ukusebenzisa ikhadi lesipho le-DAZN.
Ixabiso lentlawulo yenyanga nganye yi-9,99 euro. Ukuba ufuna ikhontrakthi ye-DAZN unyaka wonke, unokukhetha ukwenza intlawulo ye-99,99 euro, eya kuguqula intlawulo yenyanga ibe malunga ne-8,33 ye-euro.
Ezinye iindlela zokubona iiOlimpiki zaseTokyo 2020
Ngelixa i-DAZN yenye yeendlela ozithandayo ukubona iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020, zininzi nezinye ezinokuba zilungile.
I-RTVE (iRadio yaseSpain kunye neTV)
Kwindawo yokuqala sine-RTVE (iSpanish Radio Television), Enye yeendlela eziphambili zelizwe zokujonga umsitho kunye nemidlalo emininzi eza kubakho kwezi Olimpiki. Kusimahla kwaye kuya kugubungela umsitho wokuvula nokuvula, kunye nemidlalo emininzi, uqeqesho, kunye nemidlalo eya kubakho kulo msitho.
IMovistar lelinye losasazo eligubungela imicimbi yezemidlalo eSpain. Kungenxa yoko Olunye ukhetho olulungileyo lokubona yonke into eyenzekayo kwinqanaba lezemidlalo, hayi kwimidlalo yeOlimpiki kuphela, kodwa nakweminye imisitho, kunye nebhola ekhatywayo yamanye amazwe, iiligi zebhola yomnyazi kunye neminye imidlalo emininzi.
Kukwakhona iVodafone, ebonelela abathengi bayo kwiEurosport Player ukubukela ii-Olimpiki zika-2020. Into emnandi ngale ndlela kukuba inezitishi ezibini, eziyi-Eurosport 1 kunye ne-Eurosport 2, ukuze ungaphoswa nangayiphi na iminyhadala yezemidlalo, ngakumbi ukubandakanyeka kweSpain.
IOlimpiki.com yiyo Elinye lamaqonga aphambili ewebhu agubungela iiOlimpiki, Ukusuka kwiindaba ukuya kumnqweno kwaye, ewe, phila kwaye uqondise ezemidlalo. Imifanekiso emininzi, iividiyo kunye nokunye okuninzi kuyaboniswa kweli phepha lewebhu. Enye indlela elungileyo yokulandela iiOlimpiki. kolu hlelo.
🥇 Zama inyanga yasimahla I-DAZN kwaye ungaphuthelwa nantoni na kwi-Olimpiki yaseTokyo ka-2021
Ngaphezulu kwamazwe angama-200 aza kuthatha inxaxheba kolu hlelo lweOlimpiki kwimisitho engama-306 yoqeqesho kwezemidlalo ezingama-42. ISpain, njengonyaka, izakubakhona, iitotali ezingama-321 zeembaleki kunye neembaleki, kuwo angama-184 angamadoda kwaye ali-137 ngabasetyhini. USaul Craviotto, kunye nendadi yobungcali uMireia Belmonte, baya kuba ngabaphathi beflegi yelizwe kumsitho wokuvula iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020.
USaúl Craviotto kunye noMireia Belmonte baphakathi kweembaleki zaseSpain ezinamabhaso namava. Kungenxa yoko le nto bekhethelwe ukumela iflegi kumsitho. Zombini zikwazile ukuphumelela iimbasa ezininzi kwiMidlalo yeOlimpiki edlulileyo. Kwaye eyokuqala yathatha inxaxheba kulo lonke udidi lweMidlalo yeOlimpiki, ukusukela ngo-2008, neyayiququzelelwe eBeijing, China.
Kwicala leBelmonte, uthathe inxaxheba kwimidlalo eliqela yeOlimpiki, kodwa hayi ngo-2008. Oku kusishiya nobukho bakhe ngo-2012, owawubanjelwe e-United Kingdom, London, no-2016, owawubanjelwe eRio de Janeiro. , Brazil.
Imidlalo kunye noqeqesho apho iSpain iya kuthatha inxaxheba khona
Amakhulu amaSpanish aza kuba yinxalenye yemidlalo kulo msitho aza kusasazwa Ezingama-29 kwezingama-35 ezemidlalo kunye neendlela ezahlukeneyoPhakathi kwazo sinokufumana ezona zithandwa kakhulu, ezinje ngokuqubha, ukukhwela ibhayisikile, ibhola yomnyazi, ibhola ekhatywayo, uthango, i-gymnastics, ukutsiba, taekwondo, ipolo yamanzi, intenetya (kwitafile), ibhola yevoli, ukutola ngetolo nabanye abaninzi.
Abanye babameli abaninzi abaza kuzama ukuphakamisa igama lelizwe kubandakanya uDamián Quintero Capdevila noSandra Sánchez Jaime (ikarati), u-Óscar Husillos (iimbaleki), uJon Rahm (igalufa), uPablo Abián (badminton), uLaura Bechdejú (wobugcisa), uGabriel U-Escobar (amanqindi), u-Alberto Ginés López (ukhwele), u-David Valero Serrano kunye no-Jofre Cullell Estapé (ngebhayisikile), u-Albert Torres Barceló (umkhondo), u-Beatriz Ferrer-Salat (ukukhwela ihashe-iressage) kunye no-Jessica Vall (ukuqubha), phakathi kwezinye amagama ngaphezulu.
ISpain iqhube njani kwiiOlimpiki zangaphambili
Kuhlelo lokugqibela lweeOlimpiki zaseRio de Janeiro, ezazikwiphepha le-Olimpiki laseRio de Janeiro Ngo-2016, iSpain yakwazi ukuqokelela malunga neembasa ezili-16, eziyi-7 yayiyigolide, i-4 yesilivere kunye ne-6 yobhedu, ngaloo ndlela kuzalisekiswa usuku olunempumelelo ngakumbi kunolo lwango-2012 eLondon, e-United Kingdom, nangona kwezi Olimpiki itheyibhile yeembasa yayineembasa ezili-17, enye ngaphezulu; Kungenxa yokuba ezo zango-2017, ubukhulu becala, zazenziwe ngegolide, ngelixa e-United Kingdom zazingafane zibe-3.
Ngokufanayo, ISpain ibisoloko ikwazile ukuba lelinye lamazwe aneembasa ezininzi kunye neziphumo ezilungileyo kwiMidlalo yeOlimpiki. Ke ngoko kulindeleke ukuba olu hlelo lwenze ngokuchanekileyo okanye nangakumbi. Ulindelo luphezulu, kwaye kunokwenzeka ukuba irekhodi lelizwe, eliziimedali ezingama-22 ezafunyanwa kwiOlimpiki (into eyenzeka eBarcelona ngo-1992), lingagqitywa kulo nyaka, njengoko uluhlu luthembisa.
Iimbaleki ezinkulu zaseSpain ezingazukuthatha inxaxheba kwiiOlimpiki zaseTokyo 2020
Ukuba sesinye seziganeko ezibaluleke kakhulu kwezemidlalo kwihlabathi, iSpain, kunye namanye amazwe athatha inxaxheba, bahlala bebiza abameli babo ukuba balwe idabi elinzima kwaye baphumelele ubuqaqawuli be-Olimpiki. Nangona kunjalo, Kulo nyaka kukho iimbaleki kunye neembaleki ezivela eSpain abangazukubakho eTokyo, eJapan, kule 2021.
Abanye babo baquka umkhuseli USergio Ramos, ngoku oyinxalenye yeqela laseFrance i-PSG (eParis Saint Germain). Akazukuthatha inxaxheba kwiqela lebhola ekhatywayo leOlimpiki. Akunjalo noFerrán Torres, odlalela iqela lesiNgesi iManchester City, kunye noBrahim Díaz kunye noBorja Mayoral, abathi, ngokulandelelana, badlalele iReal Madrid neRomani, kwiSerie A (iligi yebhola ekhatywayo yase-Italiya).
Ngakolunye uhlangothi, ISpain ayiphumelelanga kwinqanaba lokuzivocavoca, ke abalinganiswa abanjengo-Inés Bergua, Ana Arnau, Valeria Márquez nabanye baya kushiywa. Oku kungenxa yokuthatha inxaxheba okungonelisiyo kweli lizwe kwezemidlalo.
UMaría Torres, ogqwesa kwikarati, akasayi kuya eTokyo, ngokungafaniyo noSandra Sánchez noDamián Quintero, abakwazileyo ukulungela iSpain, ngethamsanqa.
Imidlalo emitsha emi-5 yongezwa kwiiOlimpiki
Surfing, Karate, baseball / softball (ezi zimbini zibuyayo), ukunyuka kwezemidlalo kunye ne-skateboarding Siza kubabona kulo nyaka kwiMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020. Ezi sele zivunyiwe kwaye, ke ngoko, baninzi abazakuba ngabalandeli abanomdla wokubona olu hlelo, kuba ingomnye weyona misebenzi iqhelekileyo kwihlabathi-ngaphandle lokunyuka kwezemidlalo, elingalinganiyo nelinye elikhankanyiweyo-.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Uyibukela njani iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 yasimahla
Isixhobo esikhulu se-WhatsApp, ngokwenene? Siyayijonga !!
Ezona zixhobo zilungileyo zokuzoba ii-Anime kwi-Android